Yintoni i-SEO elungileyo? Nantsi iMeko yoFundo | Martech Zone
Yintoni i-SEO elungileyo? Nantsi iMeko yoFundo
NgoLwesibini, Aprili 18, 2017 NgoLwesithathu, Aprili 19, 2017 Douglas Karr
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, ndiye ibe ngokuqinisekileyo ilizwi malunga nokuba bangaphi abacebisi kunye neearhente kwishishini lokuphanda ngezinto eziphilayo ezinqabileyo ukutshintsha. Ngelishwa njengoko beqhubeka nokushiya umkhondo wabathengi otyale imali eninzi kodwa eneneni kutshatyalaliswa Amandla abo okufumana igunya lezinto eziphilayo, inqanaba, kunye nokugcwala.
I-SEO elungileyo: Isifundo semeko
Oku kulandelayo yitshathi yenye yezona ndawo zibalulekileyo zamagama abathengi abathengi 'ngokuhamba kwexesha usebenzisa Semrush:
A -Uku kuqaliswa kwewebhusayithi yabathengi phantsi kwearhente yangaphambili. Yayiyindawo entsha kraca engenagunya.
B -Emva kwexesha lokungabikho kokukhula, iarhente igqibe kwelokuba icwangcise iqhinga elidala lokudala imimandla emininzi, ihambise inani labemi elinamaphepha angaphakathi atyebileyo, kunye nokuqhagamshela ngasemva.
C Isiza sonyuke ngokumangalisayo kwinqanaba kunye nokugcwala kwabantu; Nangona kunjalo, khange kuthathe thuba lide iGoogle algorithms ukuba isuse iskimu sokunxibelelanisa ngasemva kwaye ishiye isiza sibuyele kwindawo yayo yangaphambili eyayingagunyaziswanga.
D -Iarhente yagxothwa kwaye saqeshwa ukuba sithathe indawo kunye nenqanaba lokukhangela izinto eziphilayo. Kwiinyanga ezintandathu ezizayo, sayakha kwakhona le ndawo, sahlula i-backlinks enetyhefu, sayisa yonke imimandla kwisizinda esinye, sabuyisela uninzi lwamagama aphambili kumagama aphakathi, anesihloko esinye, savelisa umxholo osisityebi, kunye ne-infographic. Saqhubeka zero backlinking ngaphandle kwenyuselo ehlawulelwayo nantoni na. Akukho nanye. Nada.
E - Iziphumo ziyaqhubeka nokuqhuba ukwabelana, ukubandakanyeka kunye notshintsho. Ngaphezulu kwencopho yemijikelezo phakathi konyaka ophelileyo nakulo nyaka, iiseshoni zinyukile ngama-210%, abasebenzisi benyukile ngama-291%, ukujonga iphepha kuye kwenyuka nge-165%, izinga lokubuyisa lihle nge-16%, iiseshoni ezintsha zinyukile ngama-32%, iindwendwe ezibuyayo zinyukile ngama-322% . Lo mthengi usebenzisa iifowuni zeshishini, ngenxa yoko asinayo idatha eguqulweyo ngaphandle kophando lweefowuni apho babuzwa ukuba bafunyanwa njani. UGoogle uyaqhubeka ukukhokela indlela.
Ndiqhubeka ndilumkisa iinkampani eziqesha abacebisi abangakhange baphande abaphulaphuli, ukhuphiswano, okanye indlela abaziphatha ngayo kwindawo leyo. Ukubuyela umva ngaphandle kwemveliso yedijithali efanelekileyo, exabisekileyo, kunye nolungiselelwe kakhulu iya kukufaka engxakini. Siyaqhubeka nokuqhuba iziphumo zabaxumi bethu ngokudlula efunyenwe igunya kunokuba Igunya esetyenziswayo okanye ehlawulelweyo.
Ukufunda okunzulu kunye nobukrelekrele bokufakelwa buyaqhubeka nokuqhuba iGoogle Rankbrain algorithm. ULarry Kim phawula:
UGoogle uza kuqhubeka nokuphicotha iphepha lakho ukuze afumane imibuzo efanelekileyo… okwexeshana. Kodwa ukuba iyasilela ekutsaleni ukubandakanyeka, iya kuqhubeka isifa kancinci kancinci. Inokuphulukana neepesenti ezintathu zethrafikhi ngenyanga-encinci ukuba awuyiqapheli de kube lixesha. Ekugqibeleni, iphepha lakho liza kuphuma ngaphandle kwembambano.
Kude kube lixesha.
Izicwangciso zanamhlanje zophando lwezinto eziphilayo azifuni abacebisi bokukhangela izolo. Izicwangciso zanamhlanje zophando lwezinto eziphilayo zifuna uphawu olukhulu kunye nabathengisi bokuqukethwe abayiqondayo indlela yokwenza uphando kunye nokulungelelanisa iinzame zakho zedijithali kubaphulaphuli bakho emva koko babanike iindlela ezilungiselelwe ukuguqula.
Ukuba umcebisi wakho wophando lwezinto eziphilayo akahlali ephanda, ebonelela ngegalelo kwizicwangciso zakho zomxholo, kunye nokwenza indawo yakho isebenze, lixesha lokuba ujonge iqabane elitsha lokukhangela izinto eziphilayo. Ngapha koko, singathanda ukunceda-ngakumbi ukuba ungumvakalisi omkhulu kakhulu. Amava ethu apho awanakuthelekiswa nanto kushishino.
tags: into embiinto elungileyoUhlobo lwegama elingundoqouphando lwezinto eziphilayouphendlo lwezinto eziphilayo iiseshoni ezintshaukujonga iphepha ngokwendaloIiseshoni zokukhangela eziphilayoAbasebenzisi bokukhangela izinto eziphilayoudidisemrushyintoni elungileyo seo
Uchitha ixesha elininzi ulawula idatha kunentengiso
Izifundo ezisi-7 zoRhwebo ngeXesha le-E-Commerce